एकाएक चर्चामा आएका मोदी जस्तै देखिने रामचन्द्रन अब फिल्म खेल्दै – PathivaraOnline
Home > समाचार > एकाएक चर्चामा आएका मोदी जस्तै देखिने रामचन्द्रन अब फिल्म खेल्दै
भारतको केरलमा बस्ने एमपी रामचन्द्रन गत वर्ष एकाएक चर्चामा आएका थिए । पायनूर रेलवे स्टेशनमा रेल कुरिरहेका उनको तस्बिर एकाएक भाइरल भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्तै देखिने उनले चाँडै नै फिल्म खेल्ने भएपछि पुनः चर्चामा छाएका छन् । नोटबन्दीमाथि बन्न लागेको फिल्म स्टेटमेन्ट ८/११ मा उनी मोदीको भूमिकामा देखिने भएका छन् ।फर्स्टपोष्टका अनुसार उक्त फिल्ममा रामचन्द्रनको तीन÷चार वटा सीन भएको बताइएको छ ।
तीमध्ये एउटा नोटबन्दीको घोषणाको हुनेछ ।स्टेटमेन्ट ८/११ एक कन्नड फिल्म हो जसलाई अप्पी प्रसादले निर्देशन गरिरकेका छन् । स्मरण रहोस्, कर्नाटकमा विधानसभाको चुनाव नजिकिँदो छ । यस्तोमा यदि यो फिल्म चुनाव अगावै रिलिज भए त्यसले नोटबन्दीको विषयमा विपक्षी पार्टीलाई एकपटक पुनः मुद्दा बनाउने मौका हुनेछ ।
नरेन्द्र मोदी जनकपुरमा !यत्रो काण्ड मच्चिए पछी पनि के मोदीले अझै सम्मान पाउलान त??
रँगशाला भत्काउनेलाई पुलिसले समात्दा उल्टो पुलिसलाई नै यस्तो धम्की ! भिडियोमै हेर्नुहोस